Werewolf Pro 2.3.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 2.3.5 လြန္ခဲ့ေသာ 1 လက
ဂိမ္းမ်ား ကဒ္ Werewolf Pro
Werewolf Pro ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
*** ဒီ app ရဲ့အခမဲ့ဗားရှင်းများအတွက် https://play.google.com/store/apps/details?id=org.faudroids.werewolf သွားပါကျေးဇူးပြုပြီး ***
*** သင်ဒီ app ကိုဝယ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူးအခမဲ့ Werewolf app ကိုအတွင်းရှိလိုလားသူဗားရှင်းပြီးသားဝယ်ကြလျှင်, သင့်အနေဖြင့်အခမဲ့ app ကိုမှတဆင့်အားလုံး updates များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည် :) ***
*** မေးခွန်းများ, တုံ့ပြန်ချက်? ငါတို့သည်သင်တို့အနေဖြင့်ကြားချင်! werewolf@bitdroid.de ***
သငျသညျပါတီဂိမ်း (စမာဖီးယားအဖြစ်လူသိများ) Werewolf play ချင်လျှင်, သင်မူကားပျောက်ဆုံးနေကဒ်များအားလုံးအစုတခုဖြစ်ပြီး, သငျသညျကလောင်နှင့်စက္ကူသုံးပြီးနဲ့တူမခံစားရဘူး, ဒီ app ကိုသင်တို့အဘို့ဖြစ်၏။ ရိုးရှင်းစွာအ (ဥပမာမည်မျှဝံပုလွေ etc) သင်အသုံးပြုချင်ပါတယ်ရသောအခန်းကဏ္ဍ, ပါဝင်သငျသှားချွတ်နေကြသည်မည်မျှကစားသမားကို configure ။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင့်ရဲ့ device န်းကျင်လက်နိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီကစားသမားဟာသူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုကြည့်ဖို့သာပုတ်နိုင်သည်။
ရရှိနိုင် 30 ကျော်အခန်းကဏ္ဍ!
- Aura ပရောဖက်
- Grumpy အဖွားအို
- Mason ဆို
- Little ကမိန်းကလေး
Werewolf Pro အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Werewolf Pro အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Werewolf Pro အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Werewolf Pro အား အခ်က္ျပပါ
superboom စတိုး 77 35.91k
Werewolf Pro ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Werewolf Pro အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 2.3.5
ထုတ်လုပ်သူ Philipp Eichhorn
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://www.bitdroid.de/legal-notice.html#datenschutz
App Name: Werewolf Pro
Release date: 2019-08-01 06:27:17
လက်မှတ် SHA1: 33:B0:D3:4D:31:4F:5D:D5:37:D2:66:90:3D:5F:4E:33:EF:FB:90:A8
အဖွဲ့အစည်း (O): FauDroids.org
Werewolf Pro APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ